'Kuuraya Dhiragoni' Ngarava Inotipa Iyo Yakanaka, Nhoroondo-Yakazadza Kutyisa - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 'Kuuraya Iyo Dhiragoni' Ngoro Inotipa Iyo Yakanaka, Fairy Tale-Yakazadza Kutyisa
kungofanana Guillermo Del Toro's mafirimu pamwe Jimena Monteoliva anoita chaizvo izvozvo futi. Kuuraya Dhiragoni zvakare yakafanana uye inotyisa fananidzo yezvinotyisa chaizvo uye runako muhupenyu, asi kuburikidza nelenzi yekuona kutsva kwaM Monteoliva.
Mutsara we Kuuraya Dhiragoni inoenda seizvi:
Nyaya yehusiku yevakoma vaviri vakaparadzaniswa noutsinye sevana. Mudiki, Elena, akavharirwa nenyika yerima, kwaanorarama hupenyu hunosiririsa. Ipo mukuru, Facundo, achiramba ari muparadhiso, maanogara hupenyu hwerunyararo sachiremba pamwe nemukadzi wake nevanasikana vaviri. Makore makumi maviri nemashanu gare gare, vaviri vakasanganazve kusangana nenhamo yemhuri yakavaparadzanisa.
Iyi firimu yakazadzwa nezvakawanda zvekuona zviratidzo izvo zviri izvo zvinhu zvaunonetsekana nazvo kuve uri mumba mako sekusvika kwako kubatidza switch iripedyo. Asi, inokwanisa kutyisidzira gehena kunze kwako pakati peaya anonakidza uye anoshamisa kurova.
Kuuraya Dhiragoni yabuda izvozvi paVOD uye inofanirwa kutarisa.
Iwe unofungei nezve turera ye Kuuraya Dhiragoni? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Ropa rakadzika ndiyo yega Jaws kubvarura firimu iwe yaunoda kuona. Tarisa tirera iko pano.
Bhurawuza Cateories Select Category Amazon (bhaisikopo) (7) Amazon (dzakateerana) (9) AppleTV + (1) Blu mahara (3) Comedy Horror (46) Comics (12) Facebook (akateedzana) (1) Ngano (31) Yakawanikwa Footage (26) Gore (23) HBO (mafirimu) (4) HBO (dzakateerana) (7) Horror Mabhuku (44) Horror Varaidzo Nhau (10,462) Anotyisa Mafirimu (175) Zvinotyisa Series (50) Zvinotyisa Subgenres (8) Hulu (akateedzana) (4) Bvunzurudzo (bhaisikopo) (32) Nhaurirano (dzakateerana) (2) LGBTQ Inotyisa (29) Lists (mafirimu) (37) Lists (akateedzana) (2) Pamusika (19) Monster Horror (9) Wongororo dzeMovie (41) Mafirimu (11) Mumhanzi (35) Netflix (bhaisikopo) (15) Netflix (akateedzana) (20) Kwete-Ngano (3) Zvakaenzana (75) Psychological Horror (zvinonakidza) (52) Series Ongororo (7) Kubvunda (bhaisikopo) (39) Kubvunda (dzakateerana) (15) Slasher (4) Shamisa uye Zvisingawanzo (35) Kutenderera Mafirimu (47) Kuratidzira Series (17) Zvidhori (2) Ngoro (firimu) (134) Ngoro (dzakateedzana) (31) Mhosva Yechokwadi (41) Vhidhiyo Mitambo (165) YouTube (bhaisikopo) (3) YouTube (akateedzana) (11)